अन्तत: युक्रेनको भन्दा बढी सेना मारिएको रुसद्वारा स्वीकार, कति मारिए ? — Sanchar Kendra
अन्तत: युक्रेनको भन्दा बढी सेना मारिएको रुसद्वारा स्वीकार, कति मारिए ?
काठमाडौं। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको ४४ औँ दिन पुग्दा युद्धमा आफूले ठूलो क्षति बेहोरेको रुसले स्वीकार गरेको छ। रुसी राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दीमित्री पेस्कोभले ब्रिटिश टेलिभिजन च्यानल स्काइ न्यूजलाई रुसी सेनाको क्षति ठूलो दुःखान्त हो भनेका छन्।
त्यसको प्रतिक्रियामा रुसले परिषद्‌बाट राजीनामा दिएको छ। परिषद्ले युक्रेनमा जारी मानव अधिकार तथा मानवीय सङ्कटप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ। र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले बोरोदीयङ्कामा थप अत्याचार गरेको बताएका छन्।
पेस्कोभले बुचामा भएको आम हत्यामा रुसी सेना जिम्मेवार रहेको आरोप अस्वीकार गर्दै स्काइ न्यूजलाई ‘हामी झुटा र असत्य समाचार भोगिरहेका छौँ’ भने।
उनले कुनै आधारबिना नै उक्त शहरमा मारिएका भनिएका व्यक्तिका तस्बिरहरू नक्कली भएको बताए। तर उनले रुसले त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना सैनिक गुमाएको बताए।
२५ मार्चका दिन रुसको रक्षा मन्त्रालयले युद्धमा उसका १,३५१ जना सैनिक मारिएको बताएको थियो। युक्रेनले भने १९ हजार रुसी सैनिक मारिएको बताएको छ। रुस र युक्रेनको अनुमानित रुसी फौज मारिएको भन्ने तथ्याङ्क स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
र विश्लेषकहरूले रुसले आफ्नो तर्फको सैन्य हताहती सङ्ख्यालाई घटाएको हुनसक्ने ठानिरहेका छन् र युक्रेनले आफ्नो नैतिक बल बलियो बनाउन सङ्ख्या बढाएको हुन सक्ने ठान्छन्।
पश्चिमा नेताहरू ७ हजारदेखि १५ हजार रुसी सेना मारिएको विश्वास गर्छन्। सन् २००० देखि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता रहँदै आएका पेस्कोभले रुसले युद्ध अन्त्यका उपायको खोजी गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।